Location: Mbido » Ịdee » Akwụkwọ Akụkọ » Ị maara na enwere ọdụ ụgbọ elu Aussie na Munich?
Ferris Wheel na Adina Munich Hotel - Foto © Elisabeth Lang
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri abụọ gara aga, mpaghara New York na-achịkọta anụ aghọọla ihe na-ewu ewu, ebe dị egwu nke ndị na-emepụta ejiji dị ka Stella McCarthy mepere ụlọ ahịa New York mbụ ya na ịbụ onye na-ewu ewu.
Mgbe ọ nọ na ngwụcha ọwụwa anyanwụ London, Shoreditch na ozugbo ntọala maka igbu ọchụ jọgburu onwe ya nke Jack the Ripper aghọọla isi obodo dị mma nke London.
Taa, nke a bụ úkwù, obodo mepere emepe nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-ewu ewu na ọtụtụ nka n'okporo ámá, ụlọ mmanya, ụlọ mmanya, na cafes dị n'okporo ámá.
Ma ugbu a, e nwere ọhụrụ East Side nke Munich ịchọpụta na pụọ ​​na ochie obodo nnukwu ọnụ ụlọ na ochie obodo Munich.
Mmepe nke East Munich malitere n'oge ngwụcha afọ nineties na ogige mbụ nke nnukwu ụlọ ọrụ nhazi nduku nke Germany (Pfanni) dị n'azụ Munich Ostbahnhof. Pfanni nọ na-emepụta ibe nduku nke Germany, nduku puree, wdg, na ọtụtụ mkpofu nduku, na-ebupụ ha na Europe niile. Osisi ahụ mechiri na 1996 wee kwaga n'èzí Munich. A tụgharịrị mpaghara ahụ niile ka ọ bụrụ Kunstpark Ost (Art Parc East), na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe ghọrọ mpaghara nnọkọ oriri na ọṅụṅụ n'abalị.
Site na mgbanwe mgbanwe na nnukwu mmepe, Munich Eastside (nke a na-akpọ Werksviertel) bụ ebe dị ugbu a (ịhụ) na nhọrọ dị mma maka ndị na-eri nri na ndị na-eri nri. craft biya aficionados, nwere ụlọ mmanya, cafes na ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị iche iche na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ọhụrụ.
Otu n'ime ihe kacha amasị bụ Ferris wheel, nke na-ewe nkeji iri atọ na ise iji gbaa ma nwee ụlọ iri abụọ na asaa dị mma. N'ụbọchị dị mma, ị nwere ike ịhụ Alps ma ọ bụ nwee ọmarịcha ọdịda anyanwụ, na-ele anya nke ọma nke Munch na-agbatị n'okpuru (mita 35) ka ị na-ekiri ụgbọ oloko ndị nwere akara kpọmkwem na ọdụ ụgbọ elu Munich (nkeji 27).
Ụlọ Nzukọ Obodo Munich – Foto © Elisabeth Lang
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ị na-achọ akara ngosi ọ bụla na Ostbahnhof, ọdụ ụgbọ oloko East Munich, yana ntụzịaka na wiil Ferris, ị na-ele anya efu. Ọ dịghị! Ọ ka bụ ihe omimi ihe mere obodo Munich ji ahọrọ idebe otu n'ime ihe nkiri kacha mma nke Munich dị ka ihe nzuzo kacha mma nke obodo ahụ.
Ma ọ bụ ebe a ka agbakwunyere ihe ọhụrụ Munich na mbara igwe ọhụrụ na-agbawa agbawa site na mmeghe nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ kacha elu Munich otu ọnwa gara aga, nke e wuru na silo nduku mbụ. Ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ Aussie mbụ nke Munich na ezigbo anya.
Nke ohuru Adina Hotel Munich dị na ala 9th ruo 25th ma na-enye echiche dị egwu na Munich. N'ụzọ na-aga n'ikuku, igwe mbuli na-enye nlele nke ụlọ Sydney Opera nke emegharịrị. Ị nwere ike ịhụ mmetụ Australia. Echiche a bụ anwansi, ọ na-adọrọkwa mmasị ikiri obere ụgbọ oloko na-acha uhie uhie ka na-ahapụ ọdụ ụgbọ oloko Ostbahnhof na ịhụ ụlọ Frauenkirche, BMW, na ụlọ elu telivishọn dị n'azụ.
Atụrụ n'elu ụlọ - Foto © Elisabeth Lang
Site na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ, ndị ọbịa nwere ike ileba anya na mpaghara eclectic dị n'akụkụ ọnụ ụzọ ma lelee ụlọ ọhụrụ e wuru n'okpuru (akụkọ asaa) ebe mmadụ nwere ike ịhụ ALM obodo mepere emepe nke ọma (njikwa ala ubi) n'elu ụlọ. Enweghị ebe igwu mmiri mara mma, mana ezigbo atụrụ na-ata nri na-ekpori ndụ n'elu ahịhịa ndụ dị n'elu ụlọ, ebe nne ọkụkọ na-arụsi ọrụ ike na-agba ọsọ ma nwee ike ịlaghachi n'enweghị nsogbu na ebe ọkụkọ ha.
Nke a bụ n'ezie agbata obi na-atọ ụtọ kwesịrị inyocha.
Airport Hotel Munich Sydney